Iindaba - ivalufa yokujonga i-wafer
Khangela ivalvekukuxhomekeka ekuhambeni kwe-medium ngokwayo kwaye ivule ngokuzenzekelayo kwaye ivale i-disc yevalve, esetyenziselwa ukuthintela i-valve ye-media flow back, eyaziwa ngokuba yi-valve yokukhangela, i-valve yendlela enye, i-valve ye-countercurrent, kunye nevalve yoxinzelelo lwangasemva. Ivalve yokukhangela luhlobo lwevalve oluzenzekelayo, umsebenzi walo oyintloko kukuthintela umva kweendaba, ukuthintela impompo kunye nokuqhuba i-motor reverse, kunye nokukhutshwa kwesixhobo esiphakathi.
INkampani ye-Newsway Valve ngumenzi oqeqeshiweyo we iivalvu zokujonga i-wafereTshayina. YethuIvalve yokujonga ipleyiti ezimbinikunye neevalvu zokujonga ipleyiti enye ziyafumaneka kwintsimbi etyhidiweyo, intsimbi yentsimbi, insimbi engenasici, intsimbi ye-duplex, intsimbi ye-super duplex, ubhedu lwe-aluminium, kunye nezinye iintsimbi ezikhethekileyo ze-alloy. Ubukhulu ukusuka kwi-1/2 "ukuya kwi-24", uxinzelelo lwe-CLASS 150 ukuya kwi-CLASS 2500LB, izihlalo ezifumaneka kwi-NBR, EPDM, PTFE, STELLITE, intsimbi ye-alloy, njl.
Iivalvu ze-NEWSWAY VALVE COMPANY zinciphisa izinto ezisetyenziswayo, zinciphisa iindleko zokuvelisa kunye nokulahlekelwa kwamandla ngexesha lokusebenza, okulungele ukukhuselwa kwendalo kunye nokugcinwa kwamandla. Ukusabela kubhengezo lokugcinwa kwamandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa, iphuhlisa ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kwamandla kwaye inikezela ngereferensi yoyilo lobunjineli kunye nolawulo.